PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Kuvalwe isikhungo kunukubezwa
Kuvalwe isikhungo kunukubezwa
Isolezwe - 2018-06-15 - IZINDABA - NONTUTHUKO NGUBANE
Gabi Gabi...okuhlabahlosile okuqukethwe yiphephandaba lakho eliphuma kusasa Isolezwe ngoMgqibelo ELAWINI LIKAMAGUMEDE Abashayeli bamatekisi ake basiyeke ngokuthi bayalushaya ucansi ..... zizwele ukuthi le ndaba ecasula uMaGumede isukelaphi
Ngabe kumele lwenziwe ngendlela ehlukile ucansi uma nizama ukuthola ingane? Zitholele izimpendulo kule ngosi kusasa EZEMFASHINI Ongoti banikeza abesifazane abathe xaxa amathiphu ngabangakugqoka emcimbini iVodacom Durban July IZINDABA Kukhalwa ngenkosi ‘eshaya amavosho’ emathaveni endawo EZEMIDLALO - Ungaphuthelwa ezingxube ezithinta okwenzeka kwiPSL.
- IDiski yoMhlaba nezindaba ze-2018 Fifa World Cup.
- Abe-Athletics SA novalo ngezingwazi kwi-IAAF World Cup.
KUVALWE isikhungo esigcina izingane emuva kokuvulelwa umphathi waso (49) icala lokudlwengula enye ingane eneminyaka engu-10.
Isikhungo iHope in Christ esiseNewcastle sivalwe uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal kulandela isigameko sokudlwengula okuthiwa senzeke ngenyanga edlule.
Okhulumela lomnyango oholwa uNkk Weziwe Thusi, uMnuz Vukani Mbhele, ukuqinisekisile izolo ukuthi emuva kwezinsolo zokudlwengula baphoqeleke ukuba izingane baziyise kwesinye isikhungo.
“Isikhungo iHope in Christ sisivalile emuva kwezinsolo zokudlwengula. Izingane sibe sesizifaka kwesinye isikhungo ukuze siqinisekise ukuthi ziphephile,” kusho uMbhele.
Isolezwe lithole ukuthi izingane ebezihlala kulesi sikhungo ezihlukumezeke ngokocansi, eziyizintandane nezinezidingo ezahlukene.
Isolezwe lithole ukuthi iningi lezingane bezinabantu abazivakashelayo kuleli khaya, okuzokwenza kube nzima njengoba sezifakwe ekhaya elikude.
UMbhele uthe abasondelene nezingane abanezikhalo kumele bathintane nomnyango ukuze bezoqhamuka neqhinga elizobasiza ukuba bakwazi ukubona izingane ngendlela.
Ngaphandle kwalokho abasebenzi balesi sikhungo kuthiwa basale dengwane njengoba bengazi ukuthi kumele benzenjani kwazise izingane abebezigadile zithathiwe.
UMbhele uthe konke lokho umnyango uyakulungisa njengoba beba nohlelo abalulandelayo uma kukhona isimo esifaka izingane engozini.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele uthe: “Kusukela ngo-12 no-14 Meyi ingane eneminyaka engu-10 eyayilala nezinye izingane kwatholakala ukuthi yayihlukunyezwa ngokocansi ngowesilisa oneminyaka engu-49. Kwavulwa icala lokudlwengula esiteshini saseNgogo, icala ladluliselwa ophikweni oluphenya amacala ocansi eNewcastle. Umsolwa ona49 waboshwa emuva kophenyo wavela enkantolo ngoMeyi 25. Icala lahoxiswa okwesikhashana. Kodwa uphenyo lusaqhubeka,” kusho uMbhele.